Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwenemapato ezvematongerwo enyika ari muMDC Alliance, vanoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanhu havafaniri kukanganwa kuti VaMugabe vaishanda nebato reZanu PF iro rakakonzera nhamo yavari kuona munyika.
Vanoti matambudziko evanhu anogona kupera kana Zanu PF yabva pachigaro.
Vachitaura mumushure memusangano wenhengo dzekomiti yeMDC Alliance inoona nezvekutsvaga rutsigiro nekuronga musangano, sachigaro wekomiti iyi, zvakare vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa, naVaMorgan Tsvangirai, VaMorgen Komichi, vakati kusiya basa kwaVaMugabe hakurevi kuti nhamo yapera.
VaKomichi vakati VaMugabe munhu aishanda nebato reZanu PF uye Zimbabwe iri mumatope ayiri nekuda kwebato iri, nekudaro matambudziko ari munyika anogona kupera chete kana Zanu PF yabva pachigaro.
VaKomichi vakati kusiya basa kwaVaMugabe kwaka tombovhiringa zvirongwa zveAlliance uyewo kukanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota.
Asi VaKomichi vakati komiti yavo muAlliance yave kuenderera mberi nebasa ichifambisa zvirongwa mumatunhu ese munyika uye tariro yavo ndeyekuti mutungamiriri mutsva wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vachiita zvavakavimbisa zvekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisai Ruhanya, vakatiwo hapana chakashata kuti vanhu vafarire kuenda kwaVaMugabe vachiti murume uyu ange atambudza vanhu munyika yose.
Vakati chakakosha igwara richatorwa nehurumende yaVaMnangagwa kubva pari zvino.
Mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vanoti kunyange hazvo vanhu vakafara zvikuru vakabatana nemasoja mukupembera kuenda kwaVaMugabe, vave kuzviona kuti matambudziko avo achipo.
Vati zvinhu hazvigoni kunakaira vanhu nekuti vanhu vese vaishanda naVaMugabe vachipo uye zvinhu zvinogona kuramba zvakaoma munyika.
Asi VaMudzengi vanoti VaMnangagwa vane mukna mukuru wekugadzirisa zvinhu munyika pamwe nekuti vemapato anopikisa vashaye basa.
Gweta rinorwira kodzero dzevakaremera, VaAbrahama Matata, vanoti hurumende yaVaMnangagwa inogona kuramba ichiwana rutsigiro kubva kune veruzhinji kana ikaita zvido zvevanhu.
VaKomichi vanoti komiti yavo iri kufamba mumatunhu ese enyika ichironga misangano yekutsvaga rutsigiro apo iri kugadzirira sarudzo dzegore rinouuya.
Pari zvino komiti iyi yakatoenda kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands North neMidlands South, Chitungiza neHarare.